China အလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Gongming Automation Technology Co. , LTD
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > KN95 မျက်နှာဖုံး > အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်ကိုခေါက်ဖုန်မှုန့်ဖုံးများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းကို PLC ထိန်းချုပ်ထားသောအပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်ပြီးစေသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်ရန်နှင့်ဖုန်မှုန့်များအောက်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက် parameter သည်
Application of အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက် is used to manufacture folding dust mask, and finished it with fully-auto by PLC controlled. အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက် can provide protection against respiratory infections and working under dust pollution.
Structural features of အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်အတူ 1.Automatic နှင့်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေး။
တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ 2.PLC ထိန်းချုပ်ထား, photoelectric detector
3. Ultrasonic ဂဟေဆော်ခြင်းအားဖြင့်အချိန်နှင့်အလုပ်သမားချွေတာပါ။
4.Interface လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ setting နှင့်လည်ပတ်မှုပါရှိပါတယ်
5.Self ရောဂါပျက်ကွက် function ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပျက်ကွက် display ကို။
6. ရိုးရှင်းသောကားမောင်းစနစ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
7. ထိန်းချုပ်မှုများအားလုံးကို software မှရရှိပြီး function ကိုညှိနှိုင်းဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။
Construction of အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
ယူနစ်အစာကျွေး 1) .Nose ဝါယာကြိုး
2) .Rewinding ယူနစ်
5) .Finished ဂဟေယူနစ်
7) .Right နား - ကွင်းဆက်နို့တိုက်ကျွေးရေးယူနစ်
၈) လက်ဝဲဘက် - ကွင်းဆက်နို့တိုက်ကျွေးရေးယူနစ်
9) .Welding ယူနစ်
10) .Rewinding ယူနစ်
Technical specification of အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်
Machine Cloth rackï¼ˆmmï¼ 28 LšL2800 X X W1200 X H1700
စက်၏နောက်အပိုင်း (မီလီမီတာ): L5000 X W1200 X H1700
30-35pcs / min
Hot Tags: အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် KN95 မျက်နှာဖုံးစက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ , CE, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်း, နောက်ဆုံးရောင်း, တစ်နှစ်အာမခံ
KN95 Edge တံဆိပ်ခတ်စက်
KF94 (ငါးမျက်နှာ) မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (၁ + ၁)